Isifo sikaCrohn ezinganeni nasebusheni | Bezzia
Isifo sikaCrohn ezinganeni nasebusheni
UMaria Jose Roldan | 28/08/2021 13:48 | Intsha, Eyendodana yakho
Izifo ezibangelwa esiswini nasemathunjini ziba njalo futhi zivame kakhulu ezinganeni nasebusheni. Imininingwane ibonisa ukuthi minyaka yonke izingane eziningi zihlushwa lolu hlobo lokugula, isifo sikaCrohn yiso esibaluleke kakhulu.
Lolu hlobo lwesimo oluthinta uhlelo lokugaya ukudla, Siqukethe ukuvuvukala okunamandla engxenyeni yokugcina yamathumbu amancane nokuqala kwesikhulu. Esihlokweni esilandelayo sikukhombisa ukuthi lolu hlobo lwesifo luzithinta kanjani izingane nabantu abasha nokuthi abazali kufanele benzeni ngalo.
1 Izimbangela zesifo sikaCrohn ezinganeni
2 Sibonakala kanjani isifo sikaCrohn
3 Lokho Abazali Abangakwenza Ngezifo ZikaCrohn
Izimbangela zesifo sikaCrohn ezinganeni
Kuze kube namuhla, asikho isizathu esithile lapho ingane ingahlushwa yilesi sifo samathumbu. Kunezici ezahlukahlukene njengokudla noma imikhuba yenhlanzeko engadala ukuthi izingane zihlakulele lesi sifo, ngenxa yokwehla kokuzivikela kwazo. Kungabangelwa nayimbangela yofuzo nomlando womndeni wengane.
Sibonakala kanjani isifo sikaCrohn
Kunezimpawu eziningana ezingakhombisa ukuthi ingane inesifo sikaCrohn:
Uhudo ngesinye sezimpawu ezivame kakhulu zalolu hlobo lwesimo. Uma lokhu kuhanjiswa kuhambisana negazi, kungenzeka kakhulu ukuthi kukhona ukuvuvukala endaweni yekholoni. Uma inani lohudo liphawuleka impela, kuyinto ejwayelekile ukuthi ukuvuvukala kwenzeke emathunjini amancane.
Esinye sezimpawu ezicacile zalesi sifo yizinhlungu kuyo yonke indawo yesisu.
Isimo sokushisa okuphezulu.
Ukungabi nesifiso sokudla okuhambisana noku ukuncipha okukhulu kwesisindo.
Ukungabi namandla nokukhathala ngawo wonke amahora osuku.
Ukubukeka kwe- izilonda namafistula.
Izinkinga ezihlangene ukukwazi ukudala isifo samathambo.
Lokho Abazali Abangakwenza Ngezifo ZikaCrohn
Ngeshwa luhlobo lwesimo esingelapheki futhi alikho ikhambi. Ingane kuzofanela iphile impilo yayo yonke ngezifo zamathumbu. Kuzoba nezikhathi lapho izimpawu zizoba nzima kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izikhathi lapho izimpawu ziba mncane kakhulu. Imithi elandelwayo kufanele ibe nenhloso yokwehlisa izimpawu nokusiza ingane noma umuntu osemncane ukuthi aphile impilo ejwayelekile ngangokunokwenzeka. Ukushintsha kwemikhuba yokudla noma ukuthatha imishanguzo ethile bangasiza ukulawula isifo sikaCrohn.
Ngamafuphi, Isifo sikaCrohn sivame kakhulu ebusheni kunasebuntwaneni,Yize imininingwane ikhombisa ukuthi izingane eziningi ziyahlushwa ukugula okunjalo. Ngokuqondene nezimpawu, ziyefana nakubantu abadala njengezingane. Uma lesi simo sihlupheka ngesikhathi sokuthomba, kungenzeka ukuthi lesi sifo sigcine ngokuba nomthelela omubi ekukhuleni okujwayelekile komuntu omusha. Ochwepheshe baveza ukubaluleka kokugxilisa ezinganeni zisencane, imikhuba emihle yokudla ukuze zizivimbele ekuthuthukiseni isimo esinjalo samathumbu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Intsha » Isifo sikaCrohn ezinganeni nasebusheni
Ukudla okuyinhloko ukulwa nokukhathala